Waxyaabaha Muhiimka ah ee Laga fiiriyo ama Lagu xusho marka la iibsanayo Computer | Africa Times
Somali IN America Program
dp world on Djibouti port
Somaliland elected President
Waxyaabaha Muhiimka ah ee Laga fiiriyo ama Lagu xusho marka la iibsanayo Computer
May 5, 2017 Shakir Essa	Leave a comment
Daabace: Mohamed Ali – AqoonKaal	| Taariikh: Friday, May 20, 2016 | 84 Jawaabood
#AqoonKaal.com: Ugu horayn inta aadan iibsan Computer waxaa muhiim ah in aad ogtahay ujeedada iyo hawsha aad u adeegsan doontid computerka: Ma waxaad u adeegsanaysaa in aad qoraalada caadiga ah ku qoratid, mase waxaad ku agaasimaysaa sawirro iyo video, mase in aad ku kaydsanaysid casharada dugsiga/iskoolka, ma waxaad rabtaa computer fudud oo aad safar la gashid, mase mid guriga uun aad ku adeegsatid iwm.
Ujeedada iyo muhiimadda ay leedahay hawsha aad u adeegsan doontid ayaad ku salayn doontaa tayada iyo qiimaha aad ka bixin doontid computerka.
Mar haddii aan ujeedada isla meel dhignay, waxaan qoraalkan AqoonKaal.com ku eegi doonaa waxyaabaha muhiimka ah ee laga fiiriyo computerka marka la iibsanayo, taas oo aan ku ogaan kartid tayada computerka, waxaana ka mid ah:
3 GHz Intel Core i7 CPU (Processor), ama ka casrisan
Processor ama CPU (oo laga soo gaabiyey Central Processing Unit) oo lagu qeexo maskaxda computerka – waa meesha kala hagta dhammaan amarrada uu computer ku fulinayo hawlaha kala duwan. Sidaas daraadeed Processor waa qaybaha ugu muhiimsan computerka, waana in aad iska hubisid xawaaraha Processor-ka (oo lagu cabbiro hal-beegga GHz). Tusaale ahaan 1.6GHz waxa ka sareeya 2GHz ama 3GHz.
Shirkadaha ugu caansan ee sameeya Processor-ka waxaa kamid ah Intel iyo AMD. Noocyadii ugu dambeeye ee Intel waxaa ka mid ah: Intel Core i3, Core i5 iyo Core i7 oo siday u kala lambar weyn yihiin u kala qaalisan. Noocyadii hore ee Processor-ka waxaa ka mid ah Pentium, Celeron, Atom iyo Xeon.
Haddii la isku kaa barbar dhigo labadan computer oo leh processor kala ah:
1.6GHz Intel Core i5 CPU, iyo3.5GHz Intel Core i7 CPU – iibso kan, waayo isagaa kaga xawaare badan sida uu amarrada u fulinayo.
500GB Hard Drive (7200 rpm), ama ka mug weyn
Hard Drive oo ah qaybta kaydka computerka, waa meesha aad ku xafidan doontid qoraalada iyo macluumaadka aad ku kaydsanaysid computerka. Marka laga hadlayo qaabka ay u shaqeeyaan, waxaa jira laba nooc oo Hard Drive ah oo kala ah:
HDD: Noocan waxaa weli laga helaa computero badan, inta badana waa riqiis, laakiin waxa uu computerka ku siyaadiyaa miisaan, waana kululaadaa. Waxaana la helaa Hard Drive noocaan ah oo mugiisu yahay 320 GB iyo ka badan (ama ka yar).SSD: Noocan waa ka guux yar yahay kan sare, islamarkaasna ka qabow yahay, laakiin waa ka qaalisan yahay. Xawaaraha ama sida degdegga ah ee Hard Drive-ku akhbaarta ku xafido waxay noqon kartaa 5,400rpm (revolutions per minute), ama kasii xawaare badan oo gaaraya 7,200rpm. Taas waa muhiim in aad ogaatid marka aad iibsanaysid computerka.
Waxaa la helaa computerro leh Hard Drive aad u mug weyn, tusaale ahaan:
750GB hard drive (5400 rpm)1TB hard drive (7200 rpm), kaas oo ah 1 Terabyte oo u dhiganta 1024GB.
Halkaas waxaad ka garan kartaa mugga Hard Drive-ka aad iibsanaysid wuxuu ku xiran yahay baaxadda xogta aad doonaysid inaad ku kaydsatid computerka.
8GB DDR3 SDRAM, ama ka casrisan
RAM (oo laga soo gaabiyey Random Access Memory) waxaa loo yaqaan xusuusta computerka, waa tan suurta gelisa in isku mar la furi karo barnaamijyo badan, sidaas daraadeed ha iibsan computer ay xusuustiisu ka yar tahay 4GB – waxaana la helaa 8GB iyo ka sii badan.
Waxaa muhiim ah in uu yahay nooca loo yaqaan DDR3 oo ay ku lingaxan tahay SDRAM – farsamadaas oo suurtagal ka dhigeysa in computerku uusan isticmaalin koronto badan, si degdeg ahna u furaya barnaamijyada. Farsamadii taas ka horeysey waxay ahayd DDR2 (oo weli laga heli karo computerada qadiimka ah).
Sidaas daraadeed haddii la isku kaa barbar dhigo labadan computer:
4GB DDR2 RAM, iyo8GB DDR3 SDRAM – kan iibso, waayo isagaa si degdeg ah u furaya barnaamijyo badan.
Ballaca Shaashadda (Screen Size)
15.6″ Touch-Screen Laptop
Ballaca shaashadda Computerka ee aad dooranaaysid waxay ku xiran tahay waxa aad u adeegsanaysid computerka. Tusaale ahaan:
13 ilaa 14 inches: Waxa uu ku habboon yaahy Laptop loogu talo safarka ama markasta qaadatid,15 inches: waa noocyada ugu badan ee la xusho marka computerka aadan marar badan qaadanayn,17 ilaa 18 inches: waa shaashad ballaaran oo loo adeegsado computerada leh shaashadda baaxadda ballaaran.
Waxa kale oo xusid mudan in la ogaado in shaashadu tahay mid ku shaqaysa taabashada gacanta (Touch-Screen), oo ah mid si toos ah shaashadda looga taaban karo faraha si loo furo barnaamijyada.
Windows 10 (64Bit) ama ka casrisan
Barnaamijka uu ku shaqeeyo computerku ee loo yaqaan “Operating System“, wuxuu noqon karaa Windows, Mac OS ama Linux. Waxaad iibsataa computer uu ku jiro nooca Operating system ee aad taqaanid. Haddii aad dooratid Windows, waxaa ugu dambeeyey Windows 10 (markii aan qoraalkan qorayey), waxaana ka horeeyey Windows 8.1 (waxaana ka sii horeeyey Windows 7 iyo XP oo hadda suuqa ka baxday).
Waxaadna hubisaa in Operating System-ku uu yahay 64Bit, waayo noocyadii hore waa 32Bit – waa farsamo la xiriirta baaxadda degdegga ah ee computer ku maarayn karo faylal iyo barnaamijyo badan (taas oo xiriir toos ah la leh RAM/memory).
Saacadaha Beterigu Shaqaynayo (Battery Life)
Marka aad iibsanaysid Laptop waxaa muhiim ah inaad ogaatid inta saacadood ee beterigu shaqaynayo koronto la’aan. Tusaale ahaan haddii aad iibsatid Laptop ballaca shaashaddiisu tahay 15 inches, waa in batarigiisu inta uu shaqaynayo aysan ka yaraaan 4 saac ama ka badan. Waxaana la helaa computero batarigoodu shaqaynayo ilaa 6 saac, 10 saac iyo ka badan.
Waxyaabo Dheeraad ah oo Muhiim ah
Waxaad kale oo aad hubisaa in computerku leeyahay qaybahan:
USB 3.0 ports: oo loo adeegsado in computerka si fudud loogu xiriirin karo aaladaha ay ka mid yihiin Camera iwm. Waxaa muhiim ah in computerku leeyahay dhawr meelood oo ah USB 3.0 (waxaa ka horeeyey USB 2.0 oo gaabis ah marka la barbar dhigo USB 3.0 – waa marka xogta lagu kala xawilayo computerada ama computerka iyo camarada oo la adeegsanayo USB 3.0 ayaa degdeg badan).
Wi-Fi: oo ah aaladda suurtagal ka dhigeysa in computerku uu soo qabsan karo khadka Internetka ee silig-la’da (wireless) oo ah khad internet ah oo aan fiilo la adeegsanayn (silig-la’), waxaana farsamadaas noqon kartaa 802.11 b/g/n Wi-Fi.
Gigabit Ethernet port: oo ah meesha lagaga xiriirin karo fiilada khadka internet ah oo xawaare sare leh.
Graphics Card: haddii aadan computerka u adeegsanayn games, waxaad tixgelinaysaa in uu computerka ku jiro Graphics card iska caadi ah. Graphics card-yada la adeegsado waxaa ka mid ah AMD iyo Nvidia, ama kuwo ka casrisan.
DVD/CD-ROM Drive: in kasta oo waayadan dambe laga sii baxayo DVD/CD, hadana weli waxaa dhici karta in loo baahdo in computerku leeyaahy khaanada (ama Drive) ah DVD/CD. (ku xisaabtan in ay gabaabsi yihiin computerada leh DVD/CD maadaama xogta lagu xeraysan karo internetka sida Google Drive, DropBox, iwm.)
Keyboard: Teebka computerku waa meelaha ugu muhiimsan maadaama ay tahay halka aad qoraalada kaga qoreysid. Sidaas daraadeed waa in Keyboar-ku noqdo mid fasiix ah oo farahi si fiican u qabsanayaan, waana in aad dareemeyid in aysan aad ciriiri u ahayn ama aad isugu dhaweyn qaybahiisa teebku.
Mouse: Hage ama mouse wanaagsan oo gacan qabad leh ayaad u baahan kartaa.
Qoraalkaan AqoonKaal.com waxaan ku soo koobnay waxyaabaha muhiimka ah ee laga fiiriyo marka la xulanayo computer. Waxaan rajaynayaa in aad qoraalkaas ka faa’iidey, ama aqoon kororsi kaaga siyaadey.
Computer Laga iibiyey Canada/USA oo loola safrayo AFRIKA/Yurub
Haddii aad comuterka ka iibsanaysid USA iyo Canada oo aad ula safri-doontid adduunka intiisa kale, waa in aad ogaatid in korontada ay isticmaalaan Maraykanka iyo Canada ay tahay 110-volt, halka badanaa adduunka kale ay tahay 220 – 240 volts. Computerada casriga ah badankoodu waa ku shaqeeyaan labada korontaba, laakiin waa in aad taas hubisid marka aad computerka iibsaneysid – hubi in ay dhegan tahay waraaq (Label) muujinaya in ay ku shaqeeyaan 100 – 240 volts oo ah noocyada korontada. Waxa kale oo aad lambarkaas ka hubisaa in uu ku qoranyahay fiilada (Adapter) korontada loogu xiriiriyo ee la socota computerka.
Korontada Soomaaliya waa 220-240 Volts (halka U.S./Canada ay ka tahay 110-120 Volts)
Waxaadna ogaataa in godka korontada ee ku dhegan derbiga guryaha ee adduunka intiisa kale uu ka duwan yahay kuwa USA iyo Canada, sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay “Universal Outlet Plug Adapter” taas afka hore ee fiilada comptuerka lagu xiro si ay u gasho godka korontada ee derbiga. Marka aad iibsanaysid “Universal Travel Outlet Plug Adapter” waxaad dukaan-gadaha u sheegtaa in computerka aad ula safeysid Afrika si aad u heshid mid ku haboon. Waxaana lagu iibiyaa goobaha computerada.
FG: Marka hore hubi in computerku xamilayo korontada ilaa 220 – 240V. Markaasna iibso birta fiilada lagu xiriirinayo ee aqbalaysta godka korontada ee dal ka baxsan USA iyo Canada haddaad computerka halkaas ka iibsatey.
Previous PostDanbi kama dhaco buurahaNext PostSida loogu sameeyo Facebook powerPoint
Get the latest News from the Africa and middle East, South africa, Nigeria, Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Ethiopia, Somalia, Kenya, somaliland, Djibouti, Sudan, south Sudan, Congo, Gabon, Gambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Cameron, Ghana, Madagascar, Angola, equatorial Geni,: breaking news, features, analysis and debate plus audio and video coverage from across the Middle East
Halkan ka raadi
Somaliland independent dayMay 18th, 2018
Independence Day in Somaliland is an annual celebration held on May 18 in Somaliland to mark the polity's declaration of independence from the rest of Somalia,
Xaafad ka mid ah Hargeysa dhirtu waa nolosha aadamaha
Ethiopia sidee ku yeelatay 19% Xaqiiqda halkan ka ogow
Degaanka buuraha almis